LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကိုရယူပြီး install လုပ်ပါ Androidsis
LG G3 ကိုဒီနည်းပညာအကြီးအကျယ်သတ်မှတ်ချက်အရ LG GXNUMX ကိုရရှိဖို့နဲ့ LG LG ရဲ့မူရင်းစတော့အိတ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ ROM တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာနောက်ကွယ်ကနေချက်ချင်းထွက်ခွာသွားဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ AOSP rom သည် Cyanogenmod 12.1 Android 5.1.1 Lollipop ကိုအခြေခံသည်ငါ့အဘို့ဖြစ်၏ LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ငါသည်ငါ့ LG G3 ကိုနိုင်ငံတကာမော်ဒယ်အတွက်ကြိုးစားခဲ့သောအခြားသူများနှင့်ခြားနားချက်တွေအများကြီးနှင့်အတူ။
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Rom AOSP, LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွင်နာမတော်ကိုတုံ့ပြန်သည် XenonHD ပါ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများ၊ ဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုထားသောစမ်းသပ်မှုပုံစံများနှင့်အပတ်စဉ်များပါဝင်သည်။ သင်၏ LG G3 International မော်ဒယ် D855 တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များအားလုံးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1 LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom XenonHD ကိုတပ်ဆင်ရန်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များ
2 LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom XenonHD ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်
3 LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom Xenon HD ကို flash လုပ်နည်း
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom XenonHD ကိုတပ်ဆင်ရန်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များ
တစ်ဦးရှိ LG က G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D855.
Android Lollipop ဗားရှင်းကိုလှိမ့်ချလိုက်ပါ။
terminal ကိုယူထားပါ အမြစ်တွယ်နှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုအတူ ထည့်သွင်းထားသည်
ယင်းတို ပြုပြင်ထားသော Recovery သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သည် ရရှိနိုင်
ရှိ backup EFS ဖိုင်တွဲ လိုလိုမယ်မယ်။
Nandroid backup မင်းအရင် Rom ကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် system တစ်ခုလုံးကိုပြမယ်
USB debugging ကို enable လုပ်ပြီးဘက်ထရီအား ၁၀၀ x ၁၀၀ ဖြင့်အားသွင်းသည်။
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom XenonHD ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်
ဖိုင်များလိုအပ်သည် ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ AOSP Android Rom ကို install လုပ်ပါသင်သည်ထိုသူတို့ကိုတရားဝင်ဖိုရမ်တွင်တိုက်ရိုက်ရှာနိုင်သည် HTCmania သင့်အားချည်နှောင်ထားသောလမ်းကြောင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးမည့်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ LG G3 အတွက် XenonHD.
၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်မည့် ZIP ပုံစံဖြင့်ချုံ့ထားသောဖိုင်နှစ်ခုသာကန့်သတ်ထားသည် ကျနော်တို့ internal သို့မဟုတ်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုက်ရိုက် decompress မပါဘဲကူးယူပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal မှ
တည်ငြိမ်သော version တွင် LG G3 အတွက် Rom XenonHD.
Android 5.1.1 အတွက် Google Gapps
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom Xenon HD ကို flash လုပ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ပြန်ဖွင့်ထားသောမြင်ကွင်း၊ TWRP ဖြစ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာလုံး၏ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါမည်။
ကိုနှိပ်ပါ သုတ် ပြု cache ကိုသုတ်, စံနစ်, ဒေတာ y Dalvik Cache ကို သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်ဖိုင်သိုမဟုတ်ဖိုင်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်ဖိုင်သိုမဟုတ်သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုအပြင် ZIP ဖိုင်နှစ်ခုကိုပြင်ပမှတ်ဥာဏ်သို့ကူးယူခဲ့ပါကသို့မဟုတ် OTG မှတစ်ဆင့်ကူးယူခြင်းသာလျှင်ဖြစ်သည်။
ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ Install နှင့်ရွေးပါ LG G3 အတွက် Rom XenonHD ၏ ZIP ကျနော်တို့က၎င်း၏မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အတည်ပြု။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိက Recovery မျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားသည် system ကို restart မပါဘဲ.
နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပါ Install နှင့်ရွေးပါ ပွင့်လင်း gapps ကျနော်တို့က၎င်း၏တပ်ဆင်အတည်ပြုပါ။
ဤဖြင့်သင်သည်အမြန်နှုန်းနှင့်ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခံစားနိုင်ပြီးဖြစ်သည် Android 5.1.1 Lollipop သည်စင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့် LG G3 တွင်ရှိသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်လ်, စနစ်ကိုယ်တိုင်မှဖုန်းသတင်းအချက်အလက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ LG G3 ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းမည့် Rom ဗားရှင်းအသစ်များ၏အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိမည့် Updates ရွေးစရာရှိသည်ကိုသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကတော့ XenonHD လို့ခေါ်တဲ့ AOSP Rom ဖြစ်တယ်
သင်၏အကောင်းဆုံး ROM သည်သင်၏ကောင်းမွန်သောကင်မရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသုံးနိုင်သည်။ NOVASTOCK AOSP ။ 700 MB ကျော်သာရှိသည့် ROM တစ်ခုသည်ကင်မရာမှအပကျန်အရာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့သည်။ lag နှင့် smart charging မရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ အာဂျင်တီးနားမှကျွန်ုပ်၏ LG G3 D-855 AR အရိုးသို့ဤ rom ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်အဖြေကိုစောင့်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pedro la Novastock သည် stock rom ဖြစ်ပြီးသင် lg camera apk is naa q see ကိုသုံးနိုင်သည်။
G3 အတွက်အကောင်းဆုံး rom သည် CloudyG3 2.3 ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမရှိပါဘူး ...
[APK] WhatsApp ၏ထူးခြားသောသတင်းစကားများမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ enable လုပ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်